Xulashada habka lacag bixinta ee iibsiyadaada: debit ama credit | Ragga Stylish
Debit ama Kaarka Deynta
Markii aan ku jirno Bangigeena oo aan soo jeedinno (ama aan ku qanacnay) naga dhigo kaarka lacag bixinta, su'aasha ayaa soo baxaysa: debit ama amaah.
Maxay ku kala duwan yihiin? Asal ahaan oo leh kaarka debit-ka koontada ayaa toos ah. Xaalada deynta, waa qaab maalgelin waxayna kuu ogolaaneysaa inaad wax iibsato adigoon lacagta ku bixin goobta.
1 Xakamaynta kharashka
2 Waxyaabaha kaararka deynta
3 Astaamaha kaararka deynta
Cunsurka go'aaminta doorashadan udhaxeysa deynta ama amaahda waa arrinta xakamaynta kharashka. Dhaqaalaha aasaasiga ah ee qoysku wuxuu kobcinayey a kordhinta isticmaalka kaararka bangiga marka la barbar dhigo kaararka deynta. Waxaa sidoo kale hoos u dhacay lacagihii dib loo dhigay.
Furaha, sida aan aragno, waa taas kaarka debitku waa aalad lacag bixin oo si otomaatig ah u dhalisa lacag koontada hubinta macmiilka. Marka laga hadlayo kaarka amaahda, kharashyadan waxaa sida caadiga ah la sameeyaa bil kasta bilowgeeda.
Waxyaabaha kaararka deynta
Iyaga oo leh waxaad ilaalisaa xakamaynta saxda ah ee waxaad qarash gareyso. Marka lagu daro in lacag lagala bixi karo xafiisyada iyo ATM-yada, waxaa loo isticmaalaa lacag ahaan dukaamada.
Qadarka iibsigu wuxuu keenaa lacag toos ah, daahitaan la'aan, koontada hubinta macmiilka.
Aad bay u yihiin waxtar u leh wax soo iibsiga maalin kasta.
Isticmaalkeeda waa lagama maarmaan xisaabtaada hubinta ku hayso bangiga bixiyaha kaarka.
Halkaas badanaa xaddidan maalinle ah oo go'an bangiga, si loogu bixiyo lacag bixinta iibsashada.
Astaamaha kaararka deynta
Sidaan aragnay, farqiga ugu weyn ayaa ah in kaararka amaahdu ay yihiin habab wax lagu bixiyo, laakiin Iyaguna waa qaab maalgelin. Waxay kuu oggolaanayaan inaad wax iibsato adigoon ku bixin dhammaan lacagta goobta isla markaana ay suurtogal tahay inaad dhawr qaybood ugu celiso.
Si ka duwan kaararka debit, amaah ahaan, muhiim maahan in lacag laguugu shubo koontada bangiga waqtiga wax iibsiga.
Waxaa caadi ahaan looga baahan yahay bixinta kaarkaan bixinta tooska ah ee mushahar bixinta ama aqoonsiga dakhliga deggan.
El xadka amaahda la heli karo waa in la cayimo heshiiska kaarka, laakiin sidoo kale way ku kala duwanaan kartaa waqtiga.
Ilaha sawirka: Stamp Legal Abogados / cnbc.com
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Tiknoolaji » Debit ama Kaarka Deynta
Koodhadhka galmada, quruxda badan iyo labka